Bogga ugu weyn Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lagu Bixiyo Si Loogu Qoro Faallooyinka Amazon 2021
Ma ogtahay in lagu siin karo lacag adiga oo ku qoraya faallooyinka Amazon? Haa! Qof kastaa wuu samayn karaa haddii aad qaaddo tallaabooyinka saxda ah. Xusuusnow waqtiyada aad rabto inaad wax iibsato laakiin aadan aad u hubin kalsoonida alaabta? Tani waxay dadka ka dhigtay inay ku tiirsanaadaan xukunka dib -u -eegayaasha alaabta.
Tirakoob la yaab leh ayaa sidaas muujiyay qiyaastii 75% macaamiisha internetka ee USA waxay ku dukaameystaan ​​Amazon. Heerkan sare ee macaamiisha Amazon ayaa sameeyey dib -u -eegisyo si aad loogu baahan yahay.
Dib -u -eegid wanaagsan ayaa awood badan u leh soo -saaraha taas oo ah sababta ay uga soo horjeedaan siyaasadda Amazon ee ah inaanay bixin dib -u -eegayaasha; waxa kale oo ay dhiirri -gelinaysaa is -dhexgalka soo -saarayaasha iyo macaamiisha.
Sida Loo Noqdo Dib -u -Eeeyaha Alaabta
Si aad u noqoto dib -u -eege badeeco, waa lama huraan inaad lahaato aag takhasus leh oo haddii kale loogu yeero baloog ama koonto kasta oo warbaahinta bulshada ah oo aad ku dhejin karto faallooyinkaaga. Tani waxay sidoo kale noqon kartaa qaab kanaal YouTube ah, emayl, ama dhammaantood.
Mishiinkaagu wuxuu kuu sahlayaa in lagu garto shirkado iyo shaqsiyaad gaar ahaan marka aad diirada saarto kaliya niche -kaaga. Waxaad kaloo abuuri kartaa degel aad ku qori karto faallooyin ballaaran. Boggaaga dib -u -eegista niche, waxaad ku qori kartaa mowduucyo sida “tobanka sare” ee gaarka ah ee badeecad gaar ah; waxaad bixin kartaa ikhtiyaarro lagu qiimeeyo badeecadaha iyo sidoo kale lagu daro xiriiryo xiriir la leh sheyga.
Sidoo kale, hubso in isbarbardhigga qiimaha, qeexitaannada, abuurista badhamada “Iibso Hadda” ay yihiin kuwo hagaagsan.
Dib -u -eegid wanaagsan ayaa ka caawisa shirkadda inay hagaajiso marka loo baahdo waxayna sidoo kale ka caawisaa dhagaystayaasha inay ka jawaabaan su'aalo badan sida:
Alaabta ma fududahay in la isticmaalo?
Miyay tahay mid tayo sare leh oo wax ku biirinaysa lacag?
Maxay yihiin waxyaabaha lagu beddeli karo badeecada?
Intee in le'eg ayaad ku kalsoon tahay sheyga?
Ma kula talineysaa dhagaystayaashaada?
Xusuusnow dib -u -eegista dhabta ahi waa inay noqotaa mid daacad ah, oo la qaybsata dhaleeceynta marka loo baahdo; tan micnaheedu waa ka hor intaadan bixin dib -u -eegid sax ah waa inaad noqotaa macaamilka badeecada aad fiirinayso.
Ha iloobin inaad la xiriirto shirkadahan aad dib u eegayso gaar ahaan marka dib u eegistaadu ay heleyso daawasho wanaagsan. Haddii alaabada aad fiirinayso lagu iibiyo Amazon, waxaad ku biiri kartaa barnaamijka ku -biirinta Amazon oo aad la wadaagi kartaa isku xirka gudbinta Amazon. Waxa kale oo laga yaabaa inaad rabto inaad ku biirto Amazon oo keli ah, halkan waxaa lagu siin karaa lacag si aad dib ugu eegto Amazon.
Haddii aad ku fiican tahay dib u eegistaada, shirkaduhu waxay kaloo kaa dhigi karaan saamayn ama safiir magacyadooda.
Sida Loo Heli Karo Shirkadaha Inay kuu Soo Diraan Alaab Dib Loo Eego
Soo -saareyaashu waxay aad u jecel yihiin inay helaan habab cusub oo kor loogu qaado oo loo iibiyo badeecaddooda sidaa darteed waxay danaynayaan dib -u -eegista alaabta; sidaa darteed waxay si sahal ah ugu diri doonaan badeecooyin gaar ahaan kuwa cusub tijaabiyayaasha iyo dib -u -eegayaasha si loo baahiyo sheygaas.
Naftaada weydii tan "haddii aad tahay soo -saare, noocee qof ayaad u diri doontaa alaabtaada si ay u tijaabiyaan oo ay dib -u -eegaan?" Su'aashani waxay ku siinaysaa aragti cad iyo faham wanaagsan oo ku saabsan aragtida soo -saaraha.
Soo -saare kasta wuxuu rabaa qof si fudud saamayn ugu yeelan kara dadweynahooda inuu tijaabiyo oo dib -u -eego badeecadooda. Markaa adiga oo ah dib -u -eegaha badeecadda, ka fakar faa'iidooyinka aad siin karto astaanta oo u oggolow soo -saaraha inuu arko, noqdo saamayn wax -ku -ool ah.
Tallaabo kale ayaa ah inaad noqoto xubin ka diiwaangashan websaydhada eCommerce, tani waxay ku siin doontaa awood aad ku dhejiso bogaggaas. Xubinnimada, waxaad la xiriirtaa soo -saareyaasha oo waxaad heshaa tijaabooyin iyo dib -u -eegis dalabyo. Waxaad sidoo kale ku biiri kartaa tijaabinta badeecada iyo dib -u -eegista aaladaha taas oo ah hab sahlan oo lagu helo dib -u -eegista. Waxaa jira dhowr meelood oo intarneedka ah; mid kastaa wuxuu u shaqeeyaa si xoogaa ka duwan sidii hore si aad u barato nidaamka madal kasta. Waxa xiisaha lihi, waxaad ka heli kartaa sanduuqyo muunad bilaash ah oo leh dhoof bilaash ah beddelkii dib -u -eegistaada meelahan.
Tusaalooyinka tijaabinta badeecadaha iyo dib u eegista meheradaha
PINCHme: PINCHme waa adeeg onlayn ah oo u oggolaanaya xubnihiisa inay tijaabiyaan badeecadaha sumcadaha hoggaaminaya beddelkooda ra'yi -celinta, waana lacag la'aan.
Sanduuqa Goodie Daily: Kani waa sanduuq gebi ahaanba bilaash ah oo wanaagsan oo la soo dhejiyo maalin kasta oo ay la socdaan 50-100 ka-faa'iideystayaal oo weliba maraakiib lacag la'aan ah. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad iska diiwaangeliso oo aad faallo ka bixiso boggooda Facebook.
Alaabada Bilaashka ah ee Ibotta: Waxaad heli doontaa lacag -celin lacageed oo ku saabsan raashinka bisha kaliya ee ugu horreysa dhammaan gunnooyinka.
Qaar kale waa McCormick Panelist, gudiga casaan, InStyle Trendsetters, iyo qaar kale oo badan.
ARAG SIDOO KALE: Sida Loo Helo Kaarka Hadiyadaha Bilaashka Ah Waqtiga Yar | 2021
Sida Loo Qoro Faallooyinka Amazon
Amazon waa tafaariiqda ugu weyn ee internetka. Iyada oo malaayiin dukaameeysanaya ay la wadaagayaan su'aalaha iyo waaya -aragnimada, waxaad u maleyn kartaa in tabarrucyadaada aan la ogaan, laakiin waad la yaabi doontaa haddii aad si kale wax u barato. Haddii aad rabto in lagu siiyo lacag si aad dib ugu eegto Amazon ama aad hadda uun qoreyso dib-u-eegis aan abaalmarin lahayn, waxaad u baahan doontaa inaad iska qorto amazon.com waa inaad ku bixisay $ 50 amazon.com adoo adeegsanaya kaarka amaahda kaarka laba iyo tobankii bilood ee la soo dhaafay.
Si aad u bilowdo;
Gal xisaabtaada Amazon
Tag badeecada aad rabto inaad eegto.
Guji qaybta “dib u eegista macaamiisha”.
Xagga cinwaanka “dib u eeg alaabtan”, guji badhanka “qor dib u eegida macmiilka”.
Bogga xiga waa meesha aad ku qiimaynayso badeecada cinwaan cinwaan oo aad ku qorto dib u eegista.
Kadib qoritaanka dib -u -eegista, waxaad hadda garaaci kartaa badhanka 'gudbinta'.
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Siin Karo Qoraalka Amazon 2021
Mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ayaa ah in lala shaqeeyo mareegaha dib u eegista buugga. Shabakadahaani waxay ku xiraan dib -u -eegeyaasha ganacsiga iyagoo bixiya qoraayaasha Amazon, asal ahaan, waxaad heleysaa buugaag lacag la'aan ah beddelkii dib -u -eegista. Qaar ka mid ah mareegaha dib -u -eegista buuggan waa naadiga buugga ee internetka, buugaag kasta oo maado ah, akhristaha ayaa ugu jecel.
Qaab kale oo lacag laguugu qoro si aad wax ugu qorto Amazon waa adiga oo ku qoraya faallooyin ku saabsan balooggaaga iyo sida xiriir la leh. Halkan, waa inaad lahaataa balooggaaga oo aad ku biirtaa barnaamijka ku -biirinta Amazon ee la yiraahdo Amazon associate; tani waxay ku siinaysaa xiriir xiriir la leh alaabada Amazon. Xidhiidhkani wuxuu isku xiraa kuwa raacsan balooggaaga iyo Amazon taasna waxay kugu kasbataa 10% qaddar kasta oo iibsasho ah oo uu sameeyo raacahaagu.
Waxaad sidoo kale ku bixin kartaa dib -u -eegis websaydhka abaalmarinta Swagbucks oo lacag lagu siiyo. Ku kasbado dhibco badan oo la yiraahdo Swag Bucks ama SB. SB -yadaan waxaa lagu soo furan karaa lacag caddaan ah ama kaararka hadiyadda ah dukaamada tafaariiqda caanka ah iyo magacyada sida Amazon. Swagbucks waxay siisaa isticmaaleyaasha waddo ay ku siiyaan jawaab celin sumcadaha qaarkood oo alaabtooda ku iibiya Amazon.
Dib -u -eegiddu faa'iido uma laha soo -saaraha, waxay door muhiim ah ka ciyaaraan samaynta go'aanka macmiilka. Iyadoo 75% macaamiisha khadka tooska ah ee Mareykanka waxay ka dukaameystaan ​​Amazon, waa ammaan in la yiraahdo dib -u -eegista waxaa si weyn u xajin doona soo -saareyaasha u hanqal taagaya in alaabtooda la iibiyo iyo macaamiisha raadinaysa badeecadda ugu fiican oo ay iibsadaan.
amazon.com - Tilmaamaha Bulshada
moneypantry.com - 3 Siyaabood oo Loogu Qoro Faallooyinka Amazon & Lacag Lagu Siinayo (Maaha Alaab Bilaash Ah Kaliya!)
helpiewp.com - Sida Loo Noqdo Dib -u -Eeeyaha Alaabta: Tallaabo -tallaabo - Tilmaan
Sidee Silsiladda Bixinta Amazon u Shaqaysaa 2021 | Tilmaan Buuxo
Amazon Prime ma ka fiicantahay Netflix sanadka 2021? Khibradeyda
Dib -u -eegista Blippi 2021: Lacag intee leeg ayay Blippi ka samaysaa YouTube -ka?
80 Quful Florence Nightingale Quotes Ku Saabsan Kalkaalinta & Nolosha (2021)
Mercari vs Poshmark: oo ah meheradda ugu wanaagsan e-commerce ee 2021
Haddii aad leedahay ereyo aad u macaan oo aad ku raaxaysato qorista, waxaa laga yaabaa inaad ka fikirto raadinta qoritaan madaxbannaan…
21 Siyaabood Oo Lacag Loogu Siin Karo Si Loogu Sawiro Khadka Tooska ah & Khadka Tooska ah 2022 -ka
Markaa, aad baad ugu fiican tahay xagga sawirka laakiin waxaad u samaynaysay madadaalo xataa adigoo haysta koonto cas…
Alibaba Affiliates Review 2022: Sida lacag looga helo Alibaba
Waxaad tahay suuqgeyn xiriir la leh Alibaba kaasoo kasbado komishan aad u yar oo aad la yaabban tahay haddii…
Sideen uga Iibsan karaa Bitcoin gudaha Nigeria 2022? Hagaha Bilowga Hantida
Lacagta loo yaqaan 'Cryptocurrency' waxay noqotay mid ka mid ah noocyada ugu badan ka dib doorashooyinka maalgashiga ee dadka adduunka oo dhan. Halka wadamo badan...
Lacag Bixiya si aad u Dhageysato Dhibaatooyinka Dadka: 10 Siyaabood oo Lacagta Lacagta lagu kasbado 2021
Miyaad la yaabi doontaa haddii aan kuu sheego inay jiraan habab kala duwan oo Lacag -Dhageysiga Lacag loogu…
Sida lacag loogu helo akhrinta buugaagta 2022
Ilaah baa og in aan la yaabay waxyaalihii ay dadku ku sameeyeen ...